Otu esi edozi isi mmiri ịsa ahụ na-agbapụta - Akụkọ - Ningbo Huanyu Sanitary Ware Co., Ltd
Otu esi edozi isi mmiri ịsa ahụ na-agbapụta
Mgbe a na-eji mmiri ịsa ahụ mee ihe n'ụlọ ruo ogologo oge, ọ na-adịkarị mfe imechi, nkwụsị mmiri, wdg, ya mere, olee otu esi edozi isi mmiri ịsa ahụ? Ka anyị na onye nchịkọta akụkọ n'okpuru mụọ ihe.
Otu esi edozi mmiri ahụisi mmiri mmiri
Mgbe ịchọtara na isi mmiri ịsa ahụ na-agbapụta, ị ga-ebu ụzọ chọpụta kpọmkwem ihe kpatara na ebe mmiri na-asọpụta, wee mee usoro nlekọta kwesịrị ekwesị dịka ọnọdụ dị adị. Ọ bụrụ na ihe na-akpata mmiri na-agbapụta na ebe ebe mmiri na-asọpụta dị iche, usoro nlekọta ahụ ga-adị iche, dị ka egosiri n'okpuru:
1. Ọ bụrụ na isi mmiri ịsa ahụ na-agbapụta n'ọnọdụ bọọlụ steering, a ga-ewepụ isi mmiri ịsa ahụ na mgbanaka bọọlụ ahụ nke mbụ, wee chọta ngwaahịa mkpuchi yiri nke O-ring n'ime, wee nweta ngwaahịa mkpuchi ahụ. jiri nke ọhụrụ dochie ya. Ee, n'ikpeazụ tinye isi ịsa ahụ azụ.
2. Ọ bụrụ naisi mmiri mmirina-agbapụta n'ọnọdụ njikọ nke aka ahụ, buru ụzọ jiri ngwá ọrụ wepụ aka nke nozzle ịsa ahụ na eriri ịsa ahụ. Nke abụọ, hichaa eri ahụ n'ọnọdụ aka ma tinye mkpuchi kwesịrị ekwesị gburugburu eri ahụ. Nrapado maka ịrapara ọkpọkọ mmiri, ma ọ bụ na-ekechi teepu pụrụ iche maka ọkpọkọ mmiri ọtụtụ oge. Wee tinye aka nke isi mmiri ịsa ahụ azụ ma mesie ya ike.
Nke gara aga:Kedu ihe echekwabara maka iji isi mmiri ịsa ahụ
Osote:Otu esi ahọrọ isi ịsa ahụ